Vaovao - NAHOANA NO MOMBA ANTSIKA MAIMAIMPOANA PLASTIKA
Ny vidiny mora, ny fampiasana azy mora, ny fanodinana ary ny famokarana mora, ny lanjan'ny maivana ary ny fananana simika ara-batana sy simika, ny plastika dia noheverina ho iray amin'ireo fitaovana "mahomby indrindra" noforonin'ny olombelona teo amin'ny tantara. Na izany aza, mifanaraka amin'ny habetsaky ny fampiasana, ny habetsaky ny fako plastika vokarina dia ao anaty masobe ihany koa.
Fantatra fa ny salan'isa fampiasana ny kitapo plastika dia 25 minitra. Ohatra, kitapo fonosana alaina alaina, manomboka amin'ny fampiasa hatramin'ny fonosana ka hatramin'ny fanariana azy, dia misy folo minitra fohy dia fohy fotsiny. Rehefa vita ny iraka dia alefa any amin'ny fanariam-pako na fanariam-pako ireo plastika ireo, na atsipy mivantana any amin'ny ranomasina.
Saingy mety tsy fantatsika fa 400 taona mahery ny fanimbana ny harona plastika tsirairay, izay 262,8 tapitrisa minitra…
Hmanimba ve ny plastika?
Ny plastika dia voalaza fa olana amin'ny tontolo iainana an-dranomasina hatramin'ny taona 1970. Ary tato anatin'ireo taona faramparany dia nanjary manan-danja tokoa ny ahiahy avy amin'ny fiarahamonina iray manontolo.
Ny ankamaroan'ny fako mandoto ny Bay dia plastika, izay maharitra mandritra ny taona an-jatony. Ny 90% -n'ny fako eny amin'ny lalan-drano misy antsika dia tsy miovaova.
Ny fanadihadiana nataon'ny San Francisco Estuary Institute dia nampiseho fa ny zavamaniry fikarakarana rano maloto Bay Area dia namoaka sombina plastika 7000.000 isan'andro isan'andro ho any San Francisco Bay, satria tsy kely dia kely ny efijery hisamborana azy ireo. Ny mikroplastika dia mandray ny fahalotoana ary mandrahona ny bibidia izay misotro azy ireo.
Ny PCB dia singa poizina iray hafa izay mandoto ny antsanga any Bay. Ny PCB dia hita amin'ny akora fananganana taloha ary mikoriana mankany amin'ny Bay amin'ny alàlan'ny rano any an-tanàn-dehibe.
Ny habetsahan'ny otrikaina be ao amin'ny Bay, toy ny azota, dia mety hiteraka voninkazo algoma manimba atahorana ny trondro sy ny bibidia hafa. Ny voninkazo algaly sasany dia mampidi-doza amin'ny olona ihany koa, ka miteraka fikorontanana sy aretin'ny taovam-pisefoana.
Politika mandrara ny plastika
Ny fandotoana plastika an-dranomasina dia nanjary ahiahy lehibe ho an'ny tontolo iainana ho an'ny governemanta, ny mpahay siansa, ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, ary ireo mpikambana amin'ny besinimaro manerantany. Raha nanomboka ny taona 2014 ny politika hampihenana ny microbeads, ny fanelanelanana ho an'ny harona plastika dia nanomboka tamin'ny 1991 tany ho any.
- Tarika Aquariums miaraka amin'ny "NO STRAW NOVEMBER", 1 Novambra 2018
- Voarara ny plastika any Etazonia tamin'ny 1979, ary eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tamin'ny 2001.
- Kanada dia mikasa ny handrara ny plastika tokana ampiasaina amin'ny 2021
- mametra ny plastika tokana mampiasa 17 janoary 2019 i Peroa
- SAN DIEGO mandràra ny kaontenera Styrofoam amin'ny sakafo sy zava-pisotro Jan 2019
- Washington, DC, ny fandraràna mololo plastika dia manomboka amin'ny Jolay 2019
- Ny «fandrarana plastika» dia ampiharina amin'ny fomba ofisialy any Shina nanomboka tamin'ny 1 Janoary 2021
Ny taratasy no mety ho mpanova lalao amin'ity toe-javatra ity.
Inona no tokony ho paikadin'ny fonosako raha te-hiala amin'ny plastika? Mety ho fanontaniana ao an-tsain'ny orinasa maro izany. Any amin'ireo faritra misongadina amin'ny fandotoana plastika sy ireo faritra misongadina toy ny e-varotra, ny fandefasana an-tsoratra, ary ny fandefasana sakafo, ny e-varotra, ny fandefasana entana ary ny indostrian'ny entona dia mivoatra haingana. Rehefa tsy misy kitapo plastika amin'ny fiantsenana sakafo sy entina, tsy misy mololo plastika rehefa misotro zava-pisotro, izay tsy isalasalana fa hisy fiantraikany amin'ny fiainana andavanandron'ny ankamaroan'ny olona. Inona no azo ampiasaina ho solon'ny vokatra plastika?
Ny entana ao an-tokantrano sy ny vokatra ara-pahadiovana dia tsy tokony halefa aminao amin'ny fitaovana manimba ny planetantsika. Amin'ity toe-javatra ity, ny fitaovana biodegradable no laharam-pahamehana hodinihina, dia ny taratasy. Ny iray amin'ireo orinasa lehibe mpamokatra taratasy lehibe indrindra eran-tany dia namoaka ny tanjon'izy ireo ho an'ny taona 2020 ary mampiasa fomba fanao maharitra mba hahatratrarana ny tanjony voafaritra ao amin'ny Sustainability Roadmap 2020. Ny taratasy fantsom-bokatra sy ny liner anay dia 100% simba, ary koa ny laminasiantsika bio dia azo ovainaina. Safidy maharitra kokoa ao anatin'ny fironana tsy misy plastika.